> Resource > Transfer > dib eBooks in Lugood iyo dar eBooks qalabka macruufka
Ma eBooks badan iibsaday ka Lugood on your iPad, iPod taabto ama iPhone, iyo aad rabto in aad eBooks wareejiyo Lugood (ka macruufka qalabka) ee gurmad ama la wadaago asxaabta iyo qoyska? Waa wax fudud. Dhammaan waxa aad u baahan tahay waa Lugood. Maqaalkani waxa uu ku tusi doona sida ay u gudbiyaan eBooks u iibsaday inay Lugood ka iPad, iPod taabto, iyo iPhone. Waxaa laga heli karaa buugaag codaysan, PDF iyo EPUB. Intaa waxaa dheer, in aad xitaa waa inaad kala soo baxdo, gadashada iyo wareejiyo si aad iPad, iPhone, iPod xiriiri Lugood awoodaan.
Qaybta soo socda waa tutorial ah tallaabo-tallaabo ah oo ku saabsan eBooks inay kala iibsiga Lugood. Ku rakib oo ay maamulaan Lugood. Markaas dooran tilmaan faahfaahsan oo si waafaqsan ujeedada:
Qeybta 1: eBooks Bedelka in Lugood
Qeybta 2: Ku dar eBooks in macruufka Devices
Tallaabada 1. Run Lugood iyo xiriiriyaan iPhone / iPod xiriiri / iPad in kombiyuutarka.
Tallaabada 2. By gujinaya Store , waxaad ka heli liiska hoos-hoos ka waa in aad guji ah fasaxayaa Tani Computer ...
Tallaabada 3. Tani waxay kor u soo Bixiyaa wax dialoh ah, weydiinaya in aad soo gashid ID Apple iyo password. Samee iyo guji fasaxayaa .
Tallaabada 4. column bidix, midig riix ama guji xakameeyo aad iPhone / iPod xiriiri / iPad hoos AALADAHA .
Tallaabada 5. In liiska hoos-hoos u, dooro Iibsasho Transfer .
Tallaabada 6. Markaas, gadato, eBooks ka mid ah, ayaa la synced ka iPhone, iPod taabto ama iPad in Lugood. Just sugaan ilaa iyo habka uu dhamaado.
Fiiro gaar ah: Haddii ay soo iibsatay soo iibsaday IDs laga yaabaa Apple, waxaad u baahan tahay awood u computer ah u ah dhamaan. Ka sokow, waa in aad iska cad in ID Apple ah waxaa loo isticmaali karaa in la oggolaado ugu badnaan 5 kombiyuutarada.
Tallaabada 1. In uu furmo suuqa Lugood, riix Lugood Store hoos Store column.
Tallaabada 2. Click Books iyo raadin eBooks aad jeclaan lahaa in lagu daro in aad iPhone, iPad iyo iPod.
Tallaabada 3. Gali doonayo Ebook iyo dejisan ama ku iibsadaan.
Tallaabada 4. Guji si aad iPhone ama iPad hoos AALADAHA . Markaas, guji Books.
Tallaabada 5. Riix nidaameed Books iyo hubi buugaag aad doonayay. Markaas, guji codso .
Sameeyey! Waxaad dhammeeyaan inay eBooks wareejiyo Lugood ka qalabka macruufka si guul ah, iyo qeybsanaan.